मन्दिरका कर्मचारीले जब अपहरणमा परेको नाटक गरे, त्यसपछि डिएसपी श्यामु अर्यालले…. — Sanchar Kendra
मन्दिरका कर्मचारीले जब अपहरणमा परेको नाटक गरे, त्यसपछि डिएसपी श्यामु अर्यालले….
दाङ । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी श्यामु अर्याललाई शनिबार बेलुकी ९ बजेतिर फोन आयो। फोनमा टेकबहादुर विक बोले। उनी तुलसीपुर ८ दुधेनाका हुन्।
उनले सल्यान कालिमाटी वडा नम्बर ४ का ४० वर्षका खिमबहादुर वली (नवीन) तुलसीपुरबाट अपहरणमा परेको जानकारी गराउँदै खोजिदिन डिएसपी अर्याललाई आग्रह गरे। वली एक मन्दिरका कर्मचारी हुन्।
अपहरणमा परेका भनिएका वलीको मोबाइल नम्बरसमेत विकले डिएसपी अर्याललाई टिपाइदिए। तुरून्तै प्रहरीले वलीको नम्बरमा फोन गरे। ‘मलाई तुलसीपुर बजारबाट चार जनाले निलो कारमा राखेर जंगलमा ल्याई राखेका छन्। यहाँ नजिक बस्ती पनि छैन, मलाई बचाउनुस्,’ डिएसपी अर्याललाई वलीले भने।
अपहरणमा परेका भनिएका व्यक्तिले नै डिएसपी अर्याललाई जानकारी दिएपछि प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेलाई घटनाबारे जानकारी गराइयो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही, तुलसीपुरलगायतबाट प्रहरीहरू खटाइएका थिए। ४० जना प्रहरी खटाइएको थियो।
एसपी र डिएसपीले लगातार फोन गर्दा वलीले फोनमा कुरा गरिरहेका थिए। प्रहरीले आइतबार राति साढे २ बजेसम्म पनि वलीलाई फोन गरिरहेको थियो। आफू तुलसीपुरको एकान्त होटलमा खाना खाएर निस्केपछि चार जनाले अपहरण गरेको भनेर वलीले त्यसबेलासम्म पनि प्रहरीलाई भनिरहेका थिए।
उनले अपहरणकारीले आफूसँग २० हजार मागेको र आफूसँग १० हजारमात्रै रहेको बताएका थिए। पैसा नदिए मारिदिने भनेकोसमेत उनको भनाइ थियो। प्रहरीले बजार क्षेत्रमा रहेका सिसी क्यामेसाका फुटेजसमेत हेर्न थालेको थियो।
तर सिसी क्यामेरामा हेर्दा वली होटलबाट खाना खाएर पैदल नै १० बजेर ३६ मिनेटमा हिँडिरहेको तथ्य फेला पार्‍यो। उनी हिँडेरै वीरेन्द्र चोकसम्म गएको भिडिओमा देखियो। त्यसपछि वली अपहरणमा परेका होइनन् भन्नेमा प्रहरी पुग्यो।
तैपनि उनको खोजी प्रहरीले गरेका थिए। वली पनि प्रहरीसँग फोन सम्पर्कमै थिए। अन्तिममा वली आफैँले आज बिहान ३ बजेतिर आफू दमार गाउँ नजिकै रहेको सूचना प्रहरीलाई दिए। यो तुलसीपुर वडा नम्बर ३ मा पर्ने ठाउँ थियो।
प्रहरी त्यहाँ पुगेर उनलाई नियन्त्रणमा लियो। उनी बाटोमा हिँडिरहेका बेला पक्राउ परेका हुन्। उनी हिलाम्मे अवस्थामा थिए। उनले मापसे गरेको पनि प्रहरीले बताएको छ। उनले भनेजस्तै उनको साथमा १० हजार पनि थियो।
प्रहरीले वलीलाई गाडीमा राखेर तुलसीपुर ल्याउनुभन्दा पहिले राप्ति प्रादेशिक अस्पतालमा लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। उनले मापसे गरेको देखियो।
सोधपुछका क्रममा वली आफैँ अपहरणमा परेको नाटक गरेको तथ्य खुल्यो। उनी मन्दिरका कर्मचारी हुन्। मन्दिरका लागि रसिद बनाउन तुलसीपुर आएका वलीले मदिरा सेवन गरेका थिए।
‘होटलमा रक्सी पिएपछि मलाई लाग्यो। मैले के के गरे थाहा छैन,’ उनले प्रहरीसँग भनेका थिए, ‘मैले गाउँलेहरूलाई फोन पनि गरेँ। अपहरणमा परेको नाटक गरेको छु।’